Safarka Phuket | Wararka Safarka
Mariela Carril | | Maxaa la arkaa, Tailandia
Xilligan xun ee 2020 waa dhammaaday. Waxaan durbaba bilaabi karnaa inaan rajeyno inaan ka tagi doono aafada gadaasheeda isla markaana waqti uun ka dib waxaan awoodi doonnaa inaan mar kale nabad ugu safro. Oo markay sidaas tahay, ka warran Phuket?
Phuket waa luul thailand. Waxa ugufiican hadii aad rabto xeebo paradisiacal, baashaal, nasasho iyo jawi caalami ah. Faafa kadib, nasiib wanaag Phuket wali wuu joogi doonaa wuxuuna nagu soo dhawayn doonaa gacmo furan runtii.
Waa a gobolka Thailand, oo ku yaal koonfurta ka yimid dalka. Sidoo kale waa Jasiiradda ugu weyn Thailand ee ku taal badda Andaman. Waxay leedahay wax weyn saameynta ShiinahaMarkaa waxaa jira meherado badan oo Shiine ah iyo maqaayado meel kasta. Xitaa waxaa jira xaflad khudradeed oo shiineys ah oo la qabto sanadkiiba hal mar, taas oo loogu dabaaldego caan ka ahaanshaha bulshada Shiinaha ee deegaanka.
Jasiiradda Pghuket waxay leedahay xeebo qurux badan, oo ay ku jiraan Karon, Kamala, Kata Noi, Patong ama Mai Khao, iyo malaha meesha ugu fiican ee lagu arko qorrax dhaca adduunka: Laerm Phromthep. Laakiin wax walba maahan xeebo ku xeeran halkan, sidoo kale waxaa jira nolol badan oo habeenkii ah iyo waddooyin taariikhi ah kugu martiqaadaya inaad ogaato wixii soo maray.
Marka aan ka bilowno Old Phuket, magaaladii horeWaxay ku fiican tahay baaritaanka iyo barashada magaalada iyo dadkeeda, Thais, Shiinaha, Yurubta iyo Muslimiinta doortay inay halkaan ku noolaadaan. Ku dhiska Xaaladaha badankood waa qaabka Shiinaha - Boortaqiiska, labada dhinac ee waddooyinka, waana qurux badan yihiin oo qaar baa loo beddelay matxafyo ama makhaayado ama dukaamo ama hoy. Booqo, tusaale ahaan, Matxafka Phuket Thai Hua.
Waa dariiqyada xarunta taariikhiga ah inaad ka dhadhamin karto cunnooyinka maxalliga ah, sawirro ka qaaddo dadka halkaas ku nool oo aad u arki karto dhaqanka. Haddii aad tahay Axad waxaad ku raaxeysan kartaa suuqa waddooyinka, Lat Yai, waa wax fiican inaad tijaabiso noocyada kala duwan ee cuntooyinka.
Ka tagida Old Phuket banaanka wadada waxay aadeysaa koonfurta. Ko Racha waxay leedahay laba jasiiradood, Ko Racha Noi iyo Ko Racha Yai. Labaduba waa heer sare xeebo ciid ah oo cad iyo biyo cadcad sidaas ugu habboon quusitaanka. Ko Racha Yai wuxuu ku qalabeysan yahay dhammaan tas-hiilaadka, laakiin Ko Racha Noi ayaa ugu fiican quusitaanka, runtiina kaliya basaska xirfadleyda ah ayaa loo oggol yahay maadaama ay jiraan bakhaarro iyo shark cadaan ah.
Dhinaca kale waa jasiiradda yar ee Ko Mai Thon, koonfur-bari ee Phuket, kaliya 15 km, oo leh xeebo qurux badan. Socotada oo waqti yar heysta guud ahaan wey soo maraan halkan maxaa yeelay si deg deg ah ayaa doon lagu gaadhaa. Xeeb kale oo qabow ayaa ah Koofiyad Patong. Waxay ku taalaa gacanka curvilinear oo leh ciida cad iyo suurtagalnimada in lagu dhaqmo dhammaan cayaaraha biyaha dalxiiska. Isla mar ahaantaana waxaa jira magaalo yar oo hareeraheeda ah, oo si fiican u qalabaysan xaalad kasta oo leh dukaamo, isbitaal, makhaayado iyo hudheelo.
Hat Nai Yang waa xeeb kale, oo ku taal Sirinath National Park iyo beero geedo qurux badan leh. Waxay ku hareeraysan tahay maraakiibta dhuxusha waxaana jira nolol badan oo badda ah, gaar ahaan qoolleyda badda ee u imanaya inay soo baxaan bilaha Nofeembar ilaa Febraayo. Tan waxaa sidoo kale lagu gaadhaa baabuur, waddo ahaan, laga bilaabo Phuket, iyadoo laga tago magaalada Thalang gadaal. Dhanka kale, Koofiyad suron Waa xeeb yar oo kutaala cagtiisa buur dusha ka saaran geedo geed canab ah oo hore u ahaan jiray goob lagu ciyaaro golf-ka King Rama VII.
Xeebtu waa mid aad u kacsan oo jawiga roobka mowjadaha aad u xoogan yihiin sidaa darteed ma dabaalan kartid. Xeebta waa 24 kiiloomitir u jirta magaalada Phuket. Xeeb kale oo xasilloon oo nadiif ah ayaa ah Koofiyad Laem Hees, oo leh huur iyo geedo kaas oo bixiya hooska. waa kaliya 1 kiiloomitir Hat Surin, ilaa koonfurta. Taasi waa, iyada oo leh xeebo badan oo ku yaal Phuket waxa ugu muhiimsan waa in lagu raaxeysto qorraxda, badda iyo waxqabadyada xeebta: shiraaca, quusitaanka, kalluumeysiga, dabeylaha, iwm.
Waxaan ka wada hadalnay bilowgii mid ka mid ah meelaha ugu wanaagsan adduunka ee lagu daawado qorrax dhaca: Laem Phromthep. Waa barta koonfureed ee jasiiradda, dabool, ku habboon in sawirro waaweyn laga qaado. Cirifka geeska waxaad ka arki kartaa saf geedo timireed oo ku tiirsan yaamayska, waxaa jira dhagaxyo ku yaal badda dhinaceeda iyo meel ka baxsanba waxaa ka muuqda jasiiradda Ko Kae Phitsadan. Waxaa ku yaal laydh sidoo kale, waxaa la dhisay sanadkii jubilee ee King Rama IX, halkaasna aragtidu waxay gaareysaa 39 kiilomitir.
Goob kale oo caan ah oo loo yaqaan 'Phuket', oo ay soo booqdaan dhammaan dalxiisayaasha, ayaa ah Macbadka Wat Chalong, macbud taariikhi ah oo u eg shaxanka raajo, Luangpho Chaem oo ka socda Wat Chalong, oo ah sayid ka mid ah fekerka Vipassana iyo daawada dhaqanka. Waxaa la siiyay darajada kiniisadda ee King Rama V iyo waxyaabaha halkan lagu iibiyo, astaamaha, ayaa la rumeysan yahay inay keenayaan badbaado iyo nasiib wanaag. Meel kale oo lama huraan ah ayaa ah Phuket Big Buddha, buurta, ku soo rogaya.
Waqti fiican oo aad ku aado Phuket, haddii aad jeceshahay inaad xaflad dhigato, waa - u tag Phuket Sannadka Cusub ee Shiinaha, isla sanadka cusub ee Shiinaha. Ujeedada xafladan labaad ayaa ah in la muujiyo nolosha maxalliga ah ee magaalada iyo in dalxiisayaasha la siiyo waayo-aragnimo weyn maadaama qaar badan oo ka mid ah waddooyinka xarunta taariikhiga ahi ay ka xidhan yihiin baabuurta oo ay noqdaan dad lugeynaya.
hay dhoolatusyo midabo badan leh, dadka oo ku labisnaa dharka hidaha iyo dhaqanka, banaanbaxyo raashiin ah, goob cunto lagu iibiyo meelkasta iyo howlo kale. Maalinta ugu dambeysa waa Maalinta Salaadda, dhaqan hore oo maxalli ah.
Ka dib mowjadaha dhacdooyinka dad badan oo ku nool Phuket waa Park Buugga Phuket Fantasea, bandhig u heellan dhaqanka Thai. Waxa ugu fiican ee tan ku saabsan waa waxqabad la yiraahdo Kamala yaab leh, iskudhafka farshaxanka Thai iyo dhaqammada leh saamaynta dhawaaqyada, laydhadhka iyo muusikada iyo in kabadan 10 maroodi iyo xayawaan kale oo kujira masrax weyn. Buffet waa la adeegaa waxaana ku yaal dukaamo xusuus ah sidoo kale. Wuxuu furmayaa maalin kasta marka laga reebo Khamiista, laga bilaabo 5:30 am ilaa 11:30 pm.
Illaa iyo hadda, dib u eegista quruxda Phuket, laakiin kahor intaanan dhammaysan qaar ayaan ka tagnaa tilmaamaha safarka Phuket:
. Xeebaha ku yaal xeebta koonfureed marwalba waa kuwa ugu dadka badan, halka kuwa woqooyi ku sugan ay ka deggan yihiin oo ay ku yar yihiin dadka. Xisbigu waa koonfurta.
. Dhammaan xeebaha waaweyn (Kata, Karon, Nai Han, Patong, Nai Han, Nai Yang, Mai Khao), waxay leeyihiin tas-hiilaad iyo qalab loogu talagalay quusidda, dabeylaha iyo shiraaca.
. Phuket waa meel ammaan ah oo qurux badan, xitaa habeenkii.
. Waxaad ku dhex wareegi kartaa magaalada tuk-tuk, waxaa jira taksi, basas, mootooyin kiro ah iyo gawaari. Tuk-tuks halkan ma ahan sida kuwa Bangkok oo kale, laakiin waxay leeyihiin 4 giraangiraha oo waa casaan ama jaalle. Basaska, Phuket Smart Bus, waxay ka baxaan xeebta illaa xeebta, iyo garoonka diyaaradaha, waana ku habboon yihiin. Waxaad ka iibsaneysaa Kaar Bakayle dabaqa sare ama dukaan waana intaas.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka Safarka » safarka » Maxaa la arkaa » Safarka Phuket
Maxaa lagu arkaa Baiona, Galicia
Maxaa lagu arkaa Santo Domingo